Mid Ka Mid Ah Wasiiradii Dhawaan La Magacaabay Oo Aan Haysan Wasaarad Uu La Wareego Walina Dibad Joog Ah Iyo Aragtida Uu Ka Bixiyey Kaftanka Shacabka Ee La Xidhiidha Sida Ay Isu Qabanayso Wadaadnimadiisa Iyo Fannaaniinta Uu Maamuli Doonaa! – Tusmoonline.com
Mid Ka Mid Ah Wasiiradii Dhawaan La Magacaabay Oo Aan Haysan Wasaarad Uu La Wareego Walina Dibad Joog Ah Iyo Aragtida Uu Ka Bixiyey Kaftanka Shacabka Ee La Xidhiidha Sida Ay Isu Qabanayso Wadaadnimadiisa Iyo Fannaaniinta Uu Maamuli Doonaa!
Wararka	December 22, 2016	75	Like
“Fannaaniintu Umadda Ayay Ka Mid Yihiin Oo Mid Xun Iyo Mid Wanaagsan Ayay Leeyihiin Sida Wadaadkuba U Leeyahay Mid Xun Iyo Mid Wanaagsan”..Wasiir Khadar
Hargeysa (TUS):- Wasiirka Wasaaradda Dhaqanka Iyo Dalxiiska Somaliland Md. Khadar Xaaji Yuusuf Cabdilaahi oo ka mid ahaa hormadii ugu dambaysay ee ka mid noqota xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ahaana masuulkii loo magacaabay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska Somaliland ayaa isagu ah wasiir aan lahayn wasaarad uu xilkeeda la wareego oo dhisan, shaqaysa, isla markaana ah wasaarad nidaamkeeda shaqo diyaarsan yahay maadaama aanay ahayn wasaarad hore u jirtay oo noqonaysa wasaarad ku dhismaysa laba waaxood oo labada wasaaradood hore uga kala tirsanaan jirtay, taasi oo Wasiirkan ku keentay in aanu illaa imika wax xil ah la wareegin.
Wasiir Khadar Xaaji Yuusuf Cabdilaahi oo ka mid ahaa bahda waxbarashada Somaliland ahaana maamulihii dugsiyada Al-jazeera ayaa tan iyo markii loo magacaabay xilkaasi, ayaan weli la wareegin xilka wasaaraddaasi sababo la xidhiidha xafiis la’aan haysata wasaaraddaasi, waxaana mar uu la hadlaayey Talefeeshanka Star u caddeeyey in Xafiiska wasaaraddaas uu u la wareegi waayey sababo la xidhiidha xafiis la’aan iyo in loo dhiibay wasaaradda aan dhisnayn.
Wasiir Khadar Xaaji Yuusuf oo telefishankaasi l ahadlayay waxa uu yidhi: “Wasaaradda aan la wareegayaa waa qaybo la isku soo ururiyey oo kolay shaqaale way lahaayeen. Waxa ay ahaayeen laba qaybood oo kala duwan oo ku kala jiray laba wasaaradood ooh al wasaarad laga dhigayo. Wax kasta oo la aasaasayaa waxa ay u baahan tahay bud-dhig ayay u baahan tahay. Waxaad arkaysaa in wasaarado hore u jiray xilkii lala kala wareegay tanna insha allaahu maalmaha soo socda ayay noqonaysaa. Xafiisyo way leedahay, gawaadhi way leedahay, shaqaale way leedahay ma aha wax imika la bilaabayo oo way shaqayn jireen. Hawsha dhammays tirkeeda ayuunbay maalmaha soo socdaa qaadanaysaa ayaan filayaa” ayuu yidhi Wasiir Khadar.
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Somaliland Mudane Khadar Xaaji Yuusuf Cabdilaahi oo telefishanku wax ka waydiiyey su’aalo inta badan dadku iska waydiiyeen sida ay noqonayso xaaladdiisa shaqo maadaama uu ahaa nin wadaad ah oo macalin ah iyo cidda uu maamuli doono oo ay ka mid yihiin kooxaha Fannaaniinta dalku ayaa waxa uu ku jawaabay: “Fannaaniintu waa dadkeenii waa dad islaam ah weeyaan. Ma aha dad meel fog jooga ma aha. Sida ka wadaadka ah mid xun iyo mid wanaagsan looga helayo ayaa iyagana mid xun iyo mid wanaagsan ba laga helayaa. Kuwaa diinta fidinayana ku dhahoo bulshada qof xun iyo mid wanaagsanba waa laga helayaa. Anigu sas kama qabo. Meesha umaanu iman in aanu noqono kuwo dad eryaya kuwo kalena soo dhawaynaya. Dadku waa dadkeenii waa dad islaam ah. Waa dad wanaag badan leh. Ma odhanayo wax walba dhinaca negative ka ah ayaan ka eegayaa” ayuu yidhi Wasiir Khadar.
Wasaaraddan ayaa waaxyaheedu waxa ay ku kala jiraan wasaaradaha Dhallinyarada iyo Warfaafinta. Tusaale ahaan waaxda Dhaqanku waxa ay ka mid tahay wasaaradda Warfaafinta halka waaxda dalxiiskuna ku hoos jirto wasaaradda Dhallinyarada illaa imikana ma jiro qorshe cad oo xukuumaddu markii hore ugu talo gashay in lagu kala saaro balse waxa muuqata in xilalka fataha ah ee Madaxtooyada ka soo burqada uun meel looga baadhbaadhayay taasi oo aan ahayn nidaam maamul wanaag iyo qorshe xukuumadeed oo diyaarsanaa. Lama oga wakhtigan wasiirkani salka dhigi doono wasaaradda loo magacaabay ee aan hore u jirin.